သငျသညျသို့နေပါစေအဘယျသို့ကလိမ်သို့မဟုတ်ဝက်ဝံသို့မဟုတ်ပင်လိမ်မိတ်ဆွေတွေကိုဖြစ်,သင်တို့သည်ငါတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဤမျှခက်ခဲစေမယ့်ဂိမ်းကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အမျိုးအစားကနေဂိမ်းတွေနဲ့လာကျနော်တို့ဘေးကင်းလုံခြုံမယ့်ဆိုက်ပေါ်မှာသူတို့အားလုံးကိုဆောင်ခဲ့အပေါင်းတို့နှင့်တကွ,ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အားလုံးအခမဲ့အများဆုံး. ဤဆိုဒ္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာဂိမ္းမ်ားသည္သင္၏ဘေရာက္ဇာထဲသို႔ တိုက္ရိုက္၀င္ေရာက္ကစားႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီးမည္သည့္ကိရိယာကိုမွ်အသံုးျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။, ဒါဟာအစသူတို့လက်တွေ့ကျကျရွေ့လျားမှုအင်ဂျင်နှင့်အတူတိုးတက်လာသောဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူလာသည်ဟုဆိုလိုသည်,သငျတို့သအမျိုးမျိုးတို့ကိုနှင့်အတူစမ်းသပ်ကြကုန်အံ့လိမ့်မည်ဟုအများကြီးပိုမိုရှုပ်ထွေးဂိမ်းနှင့်အတူ. သငျသညျအပြန်အလှန်အချက်အံ့ဘွယ်သောအမှုပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဤဂိမ်းကစားသောအခါသင်လိင်ဆက်ဆံနေသကဲ့သို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
ကောင်းမွန်သောဂိမ်းများအပြင်,ငါတို့သည်လည်းဤနေရာတွင်ပင်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေမည်ကြောင်းအသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူလာကြ၏။ သင်သည်အခြားကစားသမားများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်ပြီးသင်၏စိတ် ၀ င်စားမှုနှင့်စိတ်ကူးယဉ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍အရာများကိုမျှဝေနိုင်သည်။ ဤအမှုအလုံးစုံအတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်အခမဲ့ခံစားနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့မဆိုပုံစံမဆိုငွေပေးချေမှုများအတွက်မမေးဘယ်တော့မှကျနော်တို့အသွားအလာပြန်ညွှန်းအဖြစ်အခြားဆိုဒ်များရောင်းချခံရဖို့ထုတ်ကုန်အဖြစ်သင်မသုံးကြဘူး။ အားလုံးအခမဲ့ဆိုဒ်များတစ်ခုခု၏ချွတ်အသက်ရှင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျနော်တို့ကြော်ငြာတွေအင်္ဂါရပ်ပြုပါ,ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်ငြာတွေမှာအားလုံးကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောမဟုတ်. သင်ဆိုက်ပေါ်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်သည့်အခါသင်အနိုင်နိုင်ပင်သူတို့ကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။, အားလုံးအတွက်,ငါတို့သည်သင်တို့အကောင်းဆုံးအိုင်ကွန်များအတွက်လိုအပ်သမျှကိုပူဇော်သက္ကာဘို့သောပလက်ဖောင်းနှင့်အတူလာကြ၏။ ရုံကဒီမှာလာကိုယ့်ကိုကိုယ်ပျော်မွေ့။
ငါတို့သည်သင်တို့အခမဲ့လိင်ပြွန်ရှိသည်ပထမဦးဆုံးအစစ်အမှန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒီဆိုဒ်မှာရှိတဲ့ဂိမ်းတွေဟာရုပ်ရှင်တွေထက်ပိုပြီးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတာကြောင့်သင့်ကိုစိတ်ကျေနပ်စေမှာပါ။ သငျသညျထိုအရပ်၌ထိုင်တော့ဘူးစောင့်ကြည့်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဂိမ်းများကိုဆောင်ခဲ့ကြသည်သောနှစ်မြှုပ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူစိတ်ကူးယဉ်သို့ငုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုအကြှနျုပျတို့သညျဤဆိုက်ပေါ်တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ချင်သောသူအပေါင်းတို့သည်စိတ်ကူးယဉ်ရှိသည်။ ငါတို့သည်ဤစုဆောင်းမှုကိုအတူတကွထားသောအခါ,ငါတို့ရှိသမျှသည်အခမဲ့ပြွန်အပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားဆိုဒ်များမှညစ်ညမ်းအမျိုးအစားများကိုစုဝေးစေပြီးတော့ကျနော်တို့စုဆောင်းမှုထဲမှာသူတို့ထဲကအားလုံးထံမှဂိမ်းထည့်သွင်းသောကြောင့်ငါသိ၏။
သင်မြည်းအတွက်ယောက်ျားနှင့်ပိုပြီးဘာမျှမလိုချင်လျှင်၊သို့မဟုတ်သူတို့ကိုသင်ရှိသည်၊သင်လုပ်နိုင်သည့်အတွက်ဆိုက်ပေါ်တွင်လိင်ဂိမ်းများ။ ဤရွေ့ကားလိင်ဂိမ်းအားလုံးဇာတ်လမ်းနှင့်ဇာတ်ကောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အချိန်ဖြုန်းခြင်းမရှိဘဲသင်ရိုးအရေးယူပူဇော်ပါလိမ့်မယ်အရာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုလိင်ဂိမ်းအကြောင်းပါ။ သင်ဤဂိမ်းတွင်ဇာတ်ကောင်များကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာ၊အရာအားလုံးကိုပိုမိုပြင်းထန်စေသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊အကယ်၍သင်သည်ကောင်းမွန်သောဇာတ်လမ်းနှင့်ဇာတ်ကောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလိုချင်ပါကကျွန်ုပ်တို့လည်းသင့်အတွက်ဂိမ်းများရှိသည်။ သငျသညျရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဦးစလုံး,ဤမျှလောက်အသေးစိတ်အတွက်သင်အကြိုက်ဆုံးစိတ်ကူးယဉ်မွေ့လျော်တံ့သောလိင်ဂိမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့တောင်မှအရာအားလုံးပုံပြင်ဖြစ်သည့်အတွက်စာသားကိုအခြေခံပြီးဂိမ်းတွေနဲ့လာကြ၏။ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအက်ပ်ဝတ္ထုသည်ဂိမ်းတိုင်းတွင်သင့်အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေသည်၊ဤဝတ္ထုများတွင်သင်မည်သို့ဇာတ်လမ်းပေါ်ပေါက်လာသည်ကိုရွေးချယ်ရန်တစ်ဦးတည်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီ၀က္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုလံုးကိုေတြ႕ၾကံဳခံစားၿပီးသင့္ရဲ႕အေကာင္းဆံုး ၀က္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။
ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းဆိုဒ်များမှကြွလာသောအခါ,တဦးတည်းအရာအမြဲအမှတ်ပေါ်ဖြစ်ရပါမည်။ မည်သည့်ပလက်ဖောင်း၏လုံခြုံရေးမျှသင်၏အမျိုးနှင့်စိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းကိုထွက်ရှာတွေ့လိမ့်မည်ဟုအာမခံရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ဒီမှာပျော်မွေ့ဘာမှလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိနေမည်။ စာဝှက်ထားတဲ့ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူလာသောကြောင့်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်သင်၏အိုင်ပီလိပ်စာကိုသိလိမ့်မည်။ ထို႔ေၾကာင့္ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္သြားလာရလြယ္ကူသည္။ ငါတို့သည်သင်တို့အခမဲ့လိင်ပြွန်ပေါ်ရတဆင်တူပြီးပြည့်စုံသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်သင်သာအခမဲ့ညစ်ညမ်းဂိမ်းကိုတွေ့လိမ့်မည်။ လာကြခြင်းနှင့်ယခုအရာအားလုံးကိုပျော်မွေ့။